Ihe egwu egwu nke Marco Borsato na Kuip na Rotterdam! : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 31 Ka 2019	• 3 Comments
Ọ bụghị na m nọ ebe ahụ, ma a ghaghị ịkọwa ya: mgbasa ozi na ụnyaahụ jupụtara na egwu egwu nke Marco Borsato na De Kuip. Aha ukwu nile nke taa di: Davina Michelle, Maan, André Hazes, Lil 'Kleine, Armin van Buren ma eleghi anya m ga echefu ihe ole na ole. Ntak emi ẹkpotde enye? N'ihi na ọ na-agagharị n'echiche nke achịcha na egwuregwu na ọ na-akpali mmasị ịhụ otú iri puku kwuru puku mmadụ si eme ememe na-eme ememe mgbe a na-ewu mgbidi ụlọ mkpọrọ gburugburu ha. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ anaghị enweta nke a dịka mgbidi ụlọ mkpọrọ, ebe ọ bụ na ha so n'òtù ndị agha, onye nchịkwa, onye njikwa ma ọ bụ onye nche nke ụlọ mkpọrọ ohuru ahụ. Ọ bụ ụlọ mkpọrọ a na-adịghị ahụ anya na-enweghị nkume nkịtị na-enweghị oghere ndị a na-ahụ anya ma ọ bụ onye ọ bụla na-ahụ ya. Nke a bụ ihe na-adịghị mma ma anyị achọghị ka ọ bụrụ nje.
Ị nwere ike ịjụ, sị: Ọ bụrụ na Marco Borsato ama ụma tinye aka na mgbasa ozi transgender site n'aka Davina Michelle (lee isiokwu a), ka ọ ka ga-enwe obi ụtọ maka ọrụ ya ma nwee obi ụtọ na ụlọ akụ buru ibu, ebe ọ maara na ụmụ ya nwere ike ịhọrọ mgbanwe mgbanwe na afọ ole na ole? John de Mol, onye nwe ANP, ọ na - enwe obi ụtọ na ọtụtụ ijeri mmadụ na akụ ya ma ọ bụ na ọ na - agba ụra n'abali mgbe ọ na - arọ nrọ ọ na - ahụ maka ọhụụ akụkọ ụgha na - emeghị? Ànyị ga-enwe obi ụtọ n'ime afọ ole na ole ka anyị bi n'okpuru usoro ịchịkwa ọchịchị? N'oge ahụ, Otú ọ dị, ị nwekwaghị nnwere onwe uche (n'ụzọ nkịtị, n'ihi na ụbụrụ gị dị n'ịntanetị) iji nwee ike iche echiche nke a.
Ị gaghịzi achọ ka anya gị mechie. I kwesịghị ịtụ anya na ndị na-ewu ụlọ na Truman ga-adị n'ihu n'ihu n'ọdịnihu. Ha choro ichikota ndi mmadu bi n'uwa dum n'igwe. Ya mere, ị ghaghị ịgbanwe onwe gị! Na-agụ lee otu ị si eme ya.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: imdb.com
Elon Musk banyere ngosiputa mgbochi, nchekwube na 'njem'
Tags: 2019, André Hazes, ANP, Armin van Buren, egwu, Davina Michelle, agba, john de mol, Cockpit, Lil 'Kleine, maan, Rotterdam
Ozi kachasị mkpa site n'aka nwoke eziokwu ahụ bụ na ị ghaghị imeri egwu ịpụ. N'ọgwụgwụ nke ihe nkiri ahụ, ọ na-abịa na mgbidi na ọ ghaghị ịrịgo ka ọ nweere onwe ya. Ozugbo n'elu, ọ ga-abanye n'ọchịchịrị site na ìhè (artificial). Ị ga-ebu ụzọ banye n'ọchịchịrị iji nweta ìhè ahụ n'ezie.
Ọ na-ada ụda nke ọma na anyị na-arịgo n'elu mgbidi mgbidi gbara gburugburu ụwa iji chọpụta ebe ndị ọzọ 33 nọ na mpaghara. Enwere otu nsogbu na ị ka nọ n'otu ọnọdụ anụ ahụ mmadụ nke ị nwere ugbu a. Nke a bụ ọnyà nke tiori ụwa, ọ ka na-ejide gị na steeti ị nọ ugbu a.
Echere m na e nwere naanị otu ụzọ na nke ahụ bụ site na ọnwụ (egwu).
Anyị agaghị eche banyere nke ahụ ogologo oge, n'ihi ya, ọ dị mma na a na-ahazi otu nnọkọ.
Taa bụ uhie 🎈😉
1 June 2019 na 01: 53
Echiche ụwa dị larịị bụ nrụrụ aka ụgha (disinformation) nke akụkụ ndị e gburu mmụọ (ala) nke anyị (eche) anyị bi. Ihe kpatara ya bụ na anyị na-achọpụta na anyị bi na simplification Lucifer (obere akụkụ).
1 June 2019 na 01: 54
Ebee ka "ndụ" abụghị okwu ziri ezi. Anyị na-ahụ nkedo (multi player) na anyị (na-aghọta ma na-egwuri egwu) mkpụrụ obi bụ onye na-ahụ maka njikwa.
" Michael P. Thijs H. Jos B. ihe mgbasa ozi mgbasa ozi niile na-eduga ngwa ngwa iwebata iwu egwu nke na-emetụta onye ọ bụla
The Thijs H. PsyOp ghaghị imebi nzuzo nzuzo na nke emeelarịrị taa »
Nleta nile: 15.826.267